စက်မှုဇုန်လူမီနီယမ်အလွိုင်းခရု Shutter တံခါး China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:တာဘိုင်ခက်မြန်ကြိတ်စက် Shutter တံခါး,ကားဂိုဒေါင်အမြင့်မြန်နှုန်း Shutter တံခါး,မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းခရုတံခါးဈေးနှုန်း
Home > ထုတ်ကုန်များ > မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး > အလူမီနီခရုအမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး > စက်မှုဇုန်လူမီနီယမ်အလွိုင်းခရု Shutter တံခါး
မော်ဒယ်နံပါတ်။: HF-J 312
ကားဂိုဒေါင်တာဘိုင်ခက်မြန် Shutter တံခါး
လိမ်ခက်အစာရှောင်ခြင်းတံခါးများမှာလည်းခက်ခဲဘက်မှာပြတင်းပေါက်ရှပ်အဖြစ်ရည်ညွှန်းလူမီနီယံအလွိုင်းအမြန်တံခါးများ, အဖြစ်လူသိများကြသည်။ ဒါဟာ Anti-ခိုးမှုနှင့်မြင့်မားသောအပူချိန် partition ကိုအတူသတ္တုအမြန်တံခါးသစ်တစ်ခုအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာယုံကြည်စိတ်ချရသောလက်တွေ့ကျပြီးလည်ပတ်ရန်လွယ်ကူသည်။ ပကတိ servo စနစ်သည်နှင့်တကွ, core ကိုတစ်ဦး DSP chip ကိုဖြစ်ပြီး, စနစ်မော်တာ၏အဆုံးမှာအကြွင်းမဲ့အာဏာအန်ကုဒ် signal ကိုလက်ခံရရှိခြင်းအားဖြင့်တံခါးဖွင့်ပွဲအမြင့်သတ်မှတ်။ ခက်တာဘိုင်မြန်နှုန်းတံခါးကို: အသစ်တခုသတ္တုစက်မှုလုပ်ငန်းတံခါးများ, တစ်စက္ကန့်အထိ 1.5 မီတာအဖွင့်မြန်နှုန်းအတွက်စွမ်းအင်ချွေတာ insulator တွင်လည်းနှင့်အကျိုးရှိစွာလေတိုက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တံဆိပ်ခတ်ထားကြ၏။
--- ထိန်းချုပ်ရေးသေတ္တာ: ထူ Hefford IP54 ထိန်းချုပ်မှုသေတ္တာ
အကြွင်းမဲ့အာဏာ servo motor ကိုစနစ်၏ပါဝင်ပါသည်: ရှားပါးမြေကြီးတပြင်အမြဲတမ်းသံလိုက် synchronous motor ကို; တင်သွင်းအကြွင်းမဲ့အာဏာအန်ကုဒ်; အာဏာကိုဘရိတ်စနစ်က; ကြီးမားသော inertia ဂြိုဟ်လျှော့ချ; လက်စွဲလွှတ်ပေးရန်ယန္တရား; လက်စွဲ device ကိုအပြစ်တင်။ အဆိုပါ Overload စွမ်းရည်ခိုင်မာတဲ့ဖြစ်တယ်, switch သည်အချို့သော High-အကြိမ်ရေအခါသမယတွင်ပိုမိုထက် 2000 ကြိမ်တစ်နေ့လျှင်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ 2000 လိုင်းများနှင့်အတူ high resolution အကြွင်းမဲ့အာဏာအန်ကုဒ်။ တစ်ဦးကလက်စွဲလွှတ်ပေးရန်ယန္တရားကိုအသုံးပြုသည်။
--- LIFT ယန္တရား
အဆိုပါလူမီနီယံအလွိုင်းကုလားကာမြန်နှုန်းမြင့်မှာ running သည့်အခါမျှမသွေ့ခြောက်သောအသံသည်ရှိပြီး, ထိုကုလားကာနှင့်အတွေးပွတ်ကြသည်မဟုတ်ကြောင်းသေချာစေရန်ဝန်-bearing လမ်းကြောင်းလမ်းညွှန်ထားပါတယ်။
လူမီနီယံအလွိုင်းကုလားကာ, ပျော့ပျောင်းသောပူးတွဲရော်ဘာချွတ်, ဝန်-bearing ရော်ဘာကွင်းဆက်များနှင့်လမ်းညွှန်ဘီး: အဆိုပါထိန်းချုပ်မှုစနစ်အားအများအပြားအရပ်သို့ခွဲခြားထားတယ်။
1, လူမီနီယံအလွိုင်းကုလားကာအထူ 1-200mm, မျက်နှာပြင် anodized နှင့်အော်ဂဲနစ်အရောင်ကုသမှုသည်ဆန့အစွမ်းသတ္တိကိုဘတ်စ်ကားပြာများအတွက် GB ကို / T5237.1-5-2000 စံအရောင်အဖြစ်လူမီနီယံအလွိုင်းသဲအဖြူနှင့်အညီ 230B / မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်ထက်ကျော်လွန် , တရုတ်အနီရောင်နှစ်ခု optional ကိုအရောင်များ;
2, ပျော့ချိတ်ဆက်ချွတ်မှတဆင့်လူမီနီယံတံခါးကို panel ကိုဆက်သွယ်ပြီးနောက်, ပျော့ပျောင်းသောပူးတွဲအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုထက်ပိုတစ်သန်းအဆတစ်ခေါက်သည်အသက်ကိုရ၏
3 အရ, ထောင့်ကွင်းဆက်ဝန်-bearing ဒီဇိုင်းကုလားကာအဆစ် unstressed စေသည်, ကုလားကာပြားများလျော့ပါးသွားမည်ဖြစ်သလိုဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, flat အချိန်ကြာမြင့်စွာပြီးနောက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်;
4. တံခါးကိုခန္ဓာကိုယ်အပြေးသောအခါ, က polyurethane လုပ်ထားတဲ့လမ်းညွှန်ဘီးကတဆင့်လူမီနီယံအလွိုင်းလမ်းကြောင်းအတွက် slides ။ အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်းမှာ running လာသောအခါပွတ်တိုက်မှုသို့မဟုတ်ဆူညံသံအဘယ်သူမျှမပေါ်ပေါက်လိမ့်မယ်။
1. Infrared ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလျှပ်စစ်မျက်စိ: တံခါးကို frame ရဲ့နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ရေဒီယိုမျက်စိစွမ်းရှိပါတယ်။ ပွင့်လင်းတံခါးကိုစောင့်ရှောက်ရန်အစာရှောင်ခြင်းတံခါးကိုအောက်မှာတ္ထုရှိပါသည်။ တံခါးကိုခန္ဓာကိုယ်ဆငျးသအခါ, အဲဒီမှာသူကအောက်မှာဖြတ်သန်း object တစ်ခုဖြစ်ပြီး, တံခါးကိုခန္ဓာကိုယ်အများဆုံးဖွင့်လှစ်အနေအထားမှဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ အချိန်နှောင့်နှေးပြီးတော့လျော့နည်းစေပါသည်။
2, အောက်ခြေဘေးကင်းလုံခြုံမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအခြမ်း: အရာဝတ္ထုအနီအောက်ရောင်ခြည်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏မျက်စိကန်းသောဇုန်အတွက်ကြောင့်တံခါးကိုခန္ဓာကိုယ်, တံခါးကိုခန္ဓာကိုယ်အတားအဆီးအောက်မှာဖိသောအခါတံခါးကိုခန္ဓာကိုယ်မြန်နှုန်းအများဆုံးဖွင့်လှစ်တံခါးနားမှာ rebounds, ကျသွားတဲ့အခါ ထိရောက်စွာ policyholder သို့မဟုတ်လမ်းလျှောက်အောက်မှာအရာဝတ္ထုမတော်တဆမှုရှောင်ရှားပါ။
3, အလင်းကုလားကာကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုစနစ်: ဒီ configuration ကို BAST စက်မှုဇုန်တံခါးကိုမှထူးခြားသောအထိရောက်ဆုံးလုံခြုံရေးကာကွယ်မှုနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဆန်ခါရိုးဖြောင့်ရာအရပျ၏ညှနျကွားထဲမှာ installed ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့် 485 ဆက်သွယ်ရေး protocol ကို အသုံးပြု. optical အကြီးအကဲများ 18 စုံကိုဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်။ ဒါဟာကုလားကာအနေအထားကိုတွက်ချက်ခြင်းနှင့်ကုလားကာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အချိန်နှင့်အမြင့်နှင့်အညီအတိတ်အတွက်လမ်းသွားလမ်းလာသို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ထိရောက်တဲ့အတိုင်းအတာဖြစ်ပါတယ်။
- --Power လိုအပ်ချက်
220V / 380V / 13 / တစ်ခုတည်းအဆင့် / 50HZ /
- --Safety စွမ်းဆောင်ရည်ကို
အသက် 30 M / S ကို (Din EN 12424 လေတိုက်ခုခံအဆင့်သတ်မှတ်ချက် 11)
insulator တွင်လည်းကိန်း: K-တန်ဖိုး 0.4W / M2K
--- တံဆိပျကို performance ကို
--- လက်စွဲစာအုပ် function ကို
လက်စွဲအရေးပေါ် device ကိုပါဝင်ပါသည်
သာမန်အမိန့်အဘို့, ခန့်သာ7ရက်။
လူမီနီယမ်အလွိုင်းခရုကြိတ်စက် Shutter တံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
aluminum တာဘိုင်မြန်ကြိတ်စက် Shutter တံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လူမီနီယမ်ခက်သတ္တု high-speed Rapid တံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက်မှုဇုန်လူမီနီယမ်အလွိုင်းအမြင့်မြန်နှုန်းခရု Shutter တံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အလိုအလျောက် Turbo အမြင့်မြန်နှုန်းကြိတ်စက် Shutter ခရုတံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အလိုအလျောက်သတ္တုတာဘိုင်ခက်မြန် Rolling Shutter တံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တာဘိုင်ခက်မြန်ကြိတ်စက် Shutter တံခါး ကားဂိုဒေါင်အမြင့်မြန်နှုန်း Shutter တံခါး မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းခရုတံခါးဈေးနှုန်း တာဘိုင်ကြိတ်စက် Shutter တံခါး တာဘိုင်ခက်မြန် Shutter တံခါး တာဘိုင်မြန်ကြိတ်စက် Shutter အစာရှောင်ခြင်းလူမီနီယမ်ကြိတ်စက် Shutter တံခါး တာဘိုင်အမြင့်မြန်နှုန်းခက်တံခါး